ဟဒီးဆ်: ဧကန်အမှန်ပင် လူတို့အနက် အဆိုးဆုံးသူများသည် အသက်ရှင်လျက် ကိယာမသ်ကို ကြုံကြိုက်ရသူများနှင့် ကဗရ်သင်္ချိုင်းများကို ဦးချရာနေရာ (ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်) များအဖြစ် ပြုလုပ်ကြသူများဖြစ်သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: ဧကန်အမှန်ပင် လူတို့အနက် အဆိုးဆုံးသူများသည် အသက်ရှင်လျက် ကိယာမသ်ကို ကြုံကြိုက်ရသူများနှင့် ကဗရ်သင်္ချိုင်းများကို ဦးချရာနေရာ (ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်) များအဖြစ် ပြုလုပ်ကြသူများဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား: အကီဒဟ် ယုံကြည်ချက်။ . နောက်ဆုံးနေ့အပေါ် အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း။ . ကိယာမသ်၏ နိမိတ်လက္ခဏာများ။ .
အဗ်ဒုလ္လာဟ်ဗင်န်မတ်စ်အူးဒ် (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)ထံမှ ဆင့်ပြန်တော်မူခဲ့သည်။ ဧကန်အမှန်ပင် လူတို့အနက် အဆိုးဆုံးသူများသည် အသက်ရှင်လျက် ကိယာမသ်ကို ကြုံကြိုက်ရသူများနှင့် ကဗရ်သင်္ချိုင်းများကို ဦးချရာနေရာ (ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်)များအဖြစ် ပြုလုပ်ကြသူများဖြစ်သည်။
ဤဟဒီးဆ်သည် ဟစန်အဆင့်ရှိသည်။ - အိမာမ် အဟ်မဒ် ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က အသိပေးမိန့်ကြားထားသည်မှာ အသက်ရှင်လျက်နှင့် ကိယာမသ်ကို ကြုံရသူများသည် အဆိုးဆုံးသောသူများဖြစ်ကြသည်။ ထို့ပြင် ထိုအဆိုးဆုံးသူများထဲတွင် ကဗရ်သင်္ချိုင်းများတွင် လည်းကောင်း၊ သင်္ချိုင်းများ ဘက်သို့လှည့်၍ လည်းကောင်း ဆွလာသ်ဆောက်တည်ကြသူများနှင့် သင်္ချိုင်းများပေါ်တွင် (ဂွန်ဗဒ်)အမိုးခုံးများတည်ဆောက်ကြသူများ ပါဝင်သည်။ ဤသည် မိမိ၏ အွမ္မသ်နောက်လိုက်သားများအား မိမိတို့၏နဗီတမန်တော်များနှင့် သူတော်စဉ်များ၏ ကဗရ်သင်္ချိုင်းများတွင် ထိုအဆိုးဆုံးသူများက လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည့် လုပ်ရပ်မျိုး မလုပ်ဆောင်ကြရန် သတိပေး တားမြစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဘာသာပြန်: အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ် စပိန် အုရ်ဒူ အင်ဒိုနီးရှား ဘော့စနီးယား ရုရှား ဘင်္ဂလီ တရုတ် ဖါရစီ(ပါရှန်း) တဂ္ဂလော့ ဟင်ဒီ ဆင်ဟာလီ ကာ့ဒ် ဟောက်ဆာ ပေါ်တူဂီ မလေးရာလမ် တေလဂူ ဆွာဟီလီ တမီးလ်
ကိယာမသ် ကမ္ဘာပျက်မည်ကို အတည်ပြုထားသည်။
ကိယာမသ်သည် အဆိုးဆုံးသူများအပေါ်တွင် ဆိုက်ရောက်လိမ့်မည်။
သင်္ချိုင်းများပေါ်တွင် မတ်စ်ဂျစ်ဒ်(ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်)များဆောက်လုပ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် အဆောက်အအုံမရှိလျှင်လည်း သင်္ချိုင်းတွင် ဆွလာသ်ဆောက်တည်ခြင်းအား တားမြစ်ထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မတ်စ်ဂျစ်ဒ် ဟူသည် အဆောက်အအုံ မရှိသည့်တိုင် (စဂ်ျဒဟ်)ပျဝပ်ဦးချသည့်နေရာအား ခေါ်ဆိုသည့် အမည်ဖြစ်သည်။
ကဗရ်သင်္ချိုင်းများတွင် ဆွလာသ်ဆောက်တည်ခြင်းသည် (ရှိရ်က်)ဖက်စပ်ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်မှုသို့ ကျရောက်ရန် အကြောင်းခံဖြစ်သဖြင့် သတိပေးတားမြစ်ထားသည်။
အကြင်သူသည် သူတော်စင်တို့၏သင်္ချိုင်းများတွင် ဆွလာသ်ဆောက်တည်ရန်အတွက် မတ်စ်ဂျစ်ဒ်(ဗလီ)များအား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်နီးကပ်မှုရရှိရန် ရည်ရွယ်ချက်ထား၍ ဆောက်လုပ်လျှင်လည်း ထိုသူသည် အဖန်ဆင်းခံများအနက် အဆိုးဆုံးသူသာဖြစ်သည်။
(ရှိရ်က်) ဖက်စပ်ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်ခြင်း၊ ၎င်း၏အကြောင်းခံများနှင့် ၎င်း(ရှိရ်က်)နှင့်နီးစပ်စေသည့် အရာများမှ သတိပေးတားမြစ်ထားသည်။ ထိုအကြောင်းခံများကို ပြုလုပ်သူသည် မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေ တားမြစ်ချက်တွင် ပါဝင်သည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က ကဗရ်သင်္ချိုင်းများတွင် မတ်စ်ဂျစ်ဒ်(ဗလီ)များ တည်ဆောက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကို ကြိုတင်သတင်းပေးထားခြင်းသည် ကိုယ်တော်၏ မုအ်ဂျိဇဟ်အနက်မှ ဖြစ်သည်။
အကီဒဟ် ယုံကြည်ချက်။ . နောက်ဆုံးနေ့အပေါ် အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း။ . ကိယာမသ်၏ နိမိတ်လက္ခဏာများ။ .
عربي English Français Español اردو Indonesia Bosanski Русский বাংলা ভাষা 中文 فارسی Tagalog हिन्दी සිංහල كوردی Hausa Português മലയാളം తెలుగు Kiswahili தமிழ்
+ရှင်းလင်းချက် +အင်္ဂလိပ် +ပြင်သစ် +စပိန် +အုရ်ဒူ +အင်ဒိုနီးရှား +ဘော့စနီးယား +ရုရှား +ဘင်္ဂလီ +တရုတ် +ဖါရစီ(ပါရှန်း) +တဂ္ဂလော့ +ဟင်ဒီ +ဆင်ဟာလီ +ကာ့ဒ် +ဟောက်ဆာ +ပေါ်တူဂီ +မလေးရာလမ် +တေလဂူ +ဆွာဟီလီ +တမီးလ်